Saddex Siyaabaha la xaawilayo in la tirtiro looduubay oo iPhone l
Guud ahaan, fariimaha farriinta codka yihiin oo ay leeyihiin shirkadaha telefoonka iyo badbaadiyey on server ay. Fariimaha ka dhacayo waqti cayiman ka dib oo laga tirtirayaa server ee shirkadda. Xaaladdan oo kale, waxaad u ma soo ceshano karaa farriinta codka tirtiray. Laakiin haddii aad bixisay muuqaalka ah farriinta, in aad ka server si aad iPhone soo bixi kartaa fariimaha aad farriinta, iyo meel kasta oo mar walba aad u maqli karo. Sidoo kale, marka aad si qalad ah la tirtiro ama iyaga si joogto ah looga badiyay aad iPhone, waxaad weli soo kaban karto iyaga.
Wondershare IPhone farriinta codka Recovery
Kabsado voicemails lumay loogu talagalay iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Si toos ah soo kabsado farriinta codka tirtiray ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Xulo soo ceshano farriinta hore ka Lugood gurmad u dhan iPhone
Sidoo kale u ogolaanaya in ay soo kabsadaan fariimaha iPhone, xiriirada, camera oo duudduuban, qoraalada, iyo in ka badan
iPod xiriiri 5, iPod xiriiri 4; macruufka 9 taageeray
Sida loo soo ceshano looduubay oo iPhone: 2 siyaabo
Sida in farriinta codka muuqaal oo uu soo badbaadiyey on your iPhone, waxaa jira laba siyaabood oo aad u soo saaro, si toos ah baarista iPhone si aad u hesho dib u soo ceshano ama ka gurmad Lugood haddii aad leedahay caado ah in ay u hagaagsan aad iPhone la Lugood.
Qaybta 1aad: Si toos ah baarista iPhone 4 / 3GS dib u soo ceshano tirtiray farriinta codka
Qeybta 2: Sawirka iyo Macdan Lugood gurmad inuu ka soo kabsado looduubay oo ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS
Qaybta 1aad: Si toos ah baarista iPhone 4 / 3GS dib u soo ceshano looduubay oo la tirtiro
Marka aad doorato sidan, waxaad u baahan tahay in la ogaado in Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) hadda soo kaban karto, kaliya fariimaha looduubay oo ay si toos ah u baar iPhone 4 iyo iPhone 3GS. Haddii aad isticmaasho iPhone 6S Plus, iPhone 6S / 6 Plus / 6/5 ama iPhone 4s, waxaad u baahan tahay inaad ugu bedesho xal ee qaybta 2.
Si aan ku bilaabo, ordo barnaamijka iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose (Haddii aad isticmaasho iPhone 3GS, waxaa si toos ah kala soo bixi doonaa fur-in halkan. Waa wax iska caadi. Just heli dhammeeyey).
Tallaabada 2. Start aad ka baareyso iPhone u badiyay fariimaha farriinta codka
Markaasuu jidkii ay raacaan hoos ku qoran si aad u hesho hab iskaanka in ay baarista iPhone:
Guji Start ee suuqa kala barnaamijka.
Press Power oo Home badhamada aad iPhone hadda muddo 10 ilbiriqsi.
10 ilbiriqsi ka dib, sii daayo button Power iyo sii riixaya badhanka Home for kale 15 ilbiriqsi.
Marka aad tahay qof xog-ogaal ah in aad heysato galay hab iskaanka ah, iyo barnaamijka bilaabmin shaandheynta iyo aad ka baareyso iPhone, kaa fasaxi kara badhanka Home iyo sug in mudo ah.
Tallaabada 3. ceshano aad horay looduubay oo ka iPhone
Farriinta codka fariimaha Ma aha oo kaliya, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) sidoo kale uu baaritaanku iyo kabanayso macluumaad kale sida sawiro iyo videos ka Roll Camera, fariimaha, xiriirada, qoraalo, iwm codka ah, waxaad riixi kartaa farriinta codka dhinaca bidix ee suuqa hoose. Markaas sax waxyaabaha aad rabto (fariimaha looduubay oo looma oggola in ay ku eegaan, aad si fiican iyaga oo dhan ka dooran lahaa dib u soo kabashada), oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya, si aad u computer ka mid ah.
Haddii aad synced aad iPhone la Lugood hor, Farriinta muuqaalka ah farriinta ayaa sidoo kale xoojiyaa galay gurmad Lugood ah. Xaaladdan oo kale, waxaad u soo ceshano karaa tirtiray fariimaha aad horay looduubay oo ay soo saarida gurmad ah Lugood, wax dhib ah maleh haddii aad isticmaasho iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 ama iPhone 3GS.
Tallaabada 1. Dooro gurmad Lugood oo ku soo saaro
Uma baahnid in aad in ay ku xidhmaan aad iPhone in comptuter marka aad sidan la qaato. Just ordi barnaamijka on your computer, iyo beddelaan inuu ka soo kabsado Lugood ee kaabta File dusheeda. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala ah sida soo socota.
Halkan, oo dhan Lugood aad files gurmad waxaa la helay iyo muxaafidka. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan si ay u soo saaro.
Tallaabada 2. Ladnaansho fariimaha iPhone farriinta codka
Skaanka aad baabbi'in doonaa dhowr ilbiriqsi. Dabadiisna, waxaad eegi kartaa oo dhan ku jira faylka gurmad ah. Sax off ikhtiyaarka ah oo horay looduubay oo guji bogsadaan. Hadda waxaad ka heli dhabarka hore fariimaha iPhone farriinta.
> Resource > Ladnaansho iPhone Data > Sida loo soo ceshano tirtiray looduubay oo iPhone